Ukunyamekela ekhaya ngezinto zokugqoka
Ngokuhamba kwexesha, ubucwebe balahlekelwa bubonakala bokuqala kunye nokumema. Ukususela ekuthinteni rhoqo kweebhotile, iintambo, amakhonkco nezinye izinto zokugcoba ngomzimba womntu, ukuqokelela kwinqanaba lamathambo kunye nelikhumba elifa, kwenzeka ngoko, kubangele ukuxhatshazwa kwabo. Ungathenga kwezinye izitolo zezinto zokugqoka, izixhobo zokunyamekela imihlobiso yakho. Ezi mpiliso zonakalisa ukungcola. Kodwa akusiyo yonke into engakwazi ukujamelana nokucoca okunjalo. Ngaphambi kokuba usebenzise ithuluzi elifanayo kwizinto zokugqoka zakho, kufuneka udibanise nomthengisi okanye i-jeweler kwaye ukhumbule ukufunda imiyalelo yokusetyenziswa.
Ngoku ungayifumana ekuthengiseni iingubo ezikhethekileyo ekunakekeleni iigugu.
Ukunyamekelwa kwekhaya ngeendyebo kunye nokuba ungalimazi njani ubucwebe bakho. Susa ukungcola kwimihlobiso yakho uze ubuyisele kubuhle babo bobudala, unokuzenza wena ekhaya. Igolide ikhawuleza kwaye ikhula. Ukususa ukungcola nokubuyisela ukubukeka kweso sikhombiso, isisombululo sesonka sinokukunceda. Ukucocwa kunokwenziwa nge-brush elula. Ngaphambi kokucoca, shiya umkhiqizo kwisisombululo se-soap for 15-20 minutes.
Ietyunithi ungazihlambulula phantse ngendlela efanayo. Faka ikhonkco kwibhotile yeplastiki, uthele kuso isisombululo sesephaphu kwaye uvale isimbozo ngokuqinile. Emva kokugubha ibhotile kunye nekholeji yakho kaninzi. Phinda le nkqubo kwiminithwana emihlanu, uze ususe umxokelelwano uze uwususe ngengubo yeboya.
I-Silverware ungayibhoca ngengubo yengubo okanye i-brocade. Kwakhona unako ukufaka amanzi kunye namazambane aqoshiwe kwaye ushiye ezimbini okanye ezintathu iiyure. Amabala amnyama athatyathwa ngokuhlamba emanzini afudumeleyo, ngokudibanisa i-ammonia. Udinga ipoyiji enye kwithayitha yamanzi. Ukuba izibonda zivela kumanzi, zihlambulule iingubo zesiliva kwiviniga efudumeleyo. Emva kwayo yonke inkqubo, susela umkhiqizo ngamanzi afudumeleyo.
Gemstones ngokucophelela, ukuze ungalonakalisi isakhelo. Ukucoca, uzakufuna i-brush entsha yezinyo, amanzi afudumele kunye ne-detergent. Abacoca kufuneka bafumane i-chlorine kunye ne-abrasives.
Iiplatinum ihlambululeka kakhulu. Thatha amanzi atshisayo, isitya sokuhlambalaza okanye ucoceko olukhethekileyo wokuhlambulula igolide.
Ukusebenzisa iziphakamiso zethu, unako ukujongana neendwanguzo ekhaya.
Indlela yokwenza iimpahla ezenziwe ngamakhaya
Indlela yokwenza itekisi yesikhashana ekhaya?
Indlela yokuzisa ucoceko olufanelekileyo endlwini?
Luhlobo luni lwe-cookware alufanelekanga ukupheka?
Yintoni enokuyenza xa i-gluten ingenelungelo lomzimba?
Ukusetyenziswa kweBhajethi kwimveliso kwiivenkile
Abantwana bakaPutin: bangaphi abantu ababenayo kuMongameli kwaye benza ntoni? Uphando lohambo
Unokunyamekela njani i-mushroom yobisi lwe-Tibet
I-saladi entsha kunye ne-salum
I-pasta ekhethiweyo kunye ne-meat and vegetables
Ukuxinezeleka: iindlela zokuqala zokukhusela nokulawula uxinzelelo
I-Saladi esuka kwi-suluguni kunye neidiya
Indlela yokukhetha iikratshi ze-roller kumntwana
Iingcali zemithi zokwelapha isibindi
I-sausages kwinhlama eneshizi kunye anyanisi
Siya kwi-kindergarten! Yintoni abazali abayilungiselela yona?
Uhlobo lwesondo: uyayazi njani into eyamenza?
Ukunyamekelwa kwezindlu: i-heliconia
UAndrei Razin wathetha ngokukhawuleza malunga nenkokheli entsha "Maye bathethe"
Ukuvuvukala nokubomvu ephahleni kwamehlo
Ulwalamano oluhle kunye nesoka elide